विवाहपछि प्राय: मानिसहरू आमाप्रतिको माया र कर्तव्य कटौती गर्न थाल्छन्, किन होला ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः वैशाख २४, २०७३ - साप्ताहिक
वैशाख २४, २०७३
विवाह भनेको कसैसँगको बन्धन हो, यस्तो बन्धनमा बाँधिएपछि ती व्यक्तिप्रतिको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एक जनालाई गरिने माया दुईमा बाँडिन्छ । एकै समय दुई जनालाई समान रूपले रेखदेख र सेवा गर्न अप्ठेरो पर्छ । फेरी जोसँग बसिन्छ, ऊसँग माया बढ्ने हो । विवाहपछि आमाभन्दा जीवनसाथीसँग बढी समय बिताइने भएकाले त्यसो भएको हो । मिस यु मम् ।
खै, आफ्नै श्रीमतीमै आमाको झझल्को पाउन थाल्छन् कि ? म किटानी गरेर त भन्न सक्दिनँ, किनभने मेरो विवाह भएको छैन । विवाह भैसकेपछि पनि म यो विषयमा त्यति अनुभव सँगाल्ने भाग्यमानीमा पर्दिनँ, किनभने मेरी आमा हुनुहुन्न ।
बाल्यकालमा आमाको काख जत्तिको प्यारो अरू केही हुँदैन । समयसँगै मानिसले अरूको साथ र माया खोज्न थाल्छ, यो प्रकृतिको नियम नै हो । जब ऊ आफूले मन पराएको व्यक्तिको मायामा भुल्न थाल्छ, स्वभावैले आफ्नी जननीबाट टाढा हुन थाल्छ ।
आमाको माया जत्तिको माया अरू कसैबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन, तर वैवाहिक जीवनपछि आफ्नो जिम्मेवारी र व्यवहार बढ्दै जाने हुनाले आमाप्रतिको मायामा कमी आएको जस्तो देखिने मात्र हो ।
त्यसो हुनुमा जीवनसाथीको पनि हात हुन्छ । जीवनसाथीको कुरा सुनेर आमालाई बिर्सनु हुँदैन ।
बादल प्रसाई, गायक
यो कुरा सबैमा लागू नहुने भए पनि यो व्यवहारिक मनोविज्ञानका पछाडि दुईवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो, मानिसलाई जति नै विवेकशील प्राणी भनेर व्याख्या गरिए पनि ऊ स्वभावैले अरूको सोचबाट पनि प्रभावित भैरहेको हुन्छ । दोस्रो, सबै व्यक्तिमा आफूलाई कसैले व्यक्तिगत ख्याल राखिदियोस् भन्ने चाहना लुकेको हुन्छ । विवाहअघि खानादेखि नानासम्मको बिषयमा गरिने विशेष माया आमाबाटै प्राप्त भैरहेको हुन्छ र विवाहपछि भने त्यो माया श्रीमतीबाट पनि थपिने हुँदा भित्री मनले मायाको विभाजन गर्छ ।
डा. सुवास प्याकुरेल, चिकित्सक
पत्नीको काखमा बसाइ सारेपछि त्यतैतिर व्यस्त भएकाले त्यसो देखिएको हुन सक्छ । मसँग चाहिँ त्यस्तो अनुभव छैन ।
आत्मीयताले निकटता निर्धारण गर्ने हुँदा नयाँ र पुरानो सम्बन्धबीच तालमेल मिलाउन नसक्दा त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
ध्रुवराज शर्मा, चित्रकलाकार
म त विवाह नभएको मान्छे । यो कुरा जान्न त विवाह नै गर्नुपर्छ ।
भनिन्छ नि, माया उधौली हुन्छ भनेर । विवाहपछि आमा र पत्नीसँगको सम्बन्धलाई सही ढंगबाट मिलाउन नसक्दा त्यस्तो स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ ।
मातृ वात्सल्यमा हुर्किएका छोराहरू आमाको अधिक मायाको रापले मात्तिएपछि मनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर विवाहपछि आमालाई चटक्क बिर्सन्छन् ।
योचाहिँ व्यक्तिमा भर पर्ने कुरा हो । बुझ्ने छोराले विवाहपछि जन्म दिने आमालाई अझ बढी माया र महत्व दिन्छन् । अझ सन्तान जन्माएपछि छोराहरूले आफ्नी आमाको महत्व बुझ्छन् । आमा र छोराको सम्बन्ध सुमधुर राख्न बुहारीको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ ।
निरु खड्का, हास्यअभिनेत्री
आमाको मायालाई श्रीमती अथवा प्रेमिकाको मायाजस्तै मान्दै भूल गर्ने छोराहरूबाट यो गल्ती भएको हो । यो कुरामा सबैलाई एकै घानमा राख्दा अन्याय हुन्छ कि ? विवाहपछि पनि
आफ्नी आमालाई शिरमा राखेर माया र कर्तव्य पालना गर्ने छोराहरूको कुनै कमी छैन ।
ज्योति काफ्ले, अभिनेता/हास्यकलाकार
श्रीमती पनि सारा संसार छोडेर अर्काको घरमा आएकी हुन्छिन् । आमा र श्रीमतीप्रतिको माया नितान्त फरक हुन्छ, जसमा तुलना गर्नै मिल्दैन । श्रीमती र आमाको मायाबीच तुलना गर्न खोज्नेहरूले त्यस्तो गर्छन् ।
कविराज निरौला, गायक
मानिसहरू क्षणिक रमझममा भुल्छन्, त्यसैले होला ।
भावना गुरुङ, मोडल/नायिका
जन्म दिने आमाको गुण जहिले पनि अमर हुन्छ । विवाहपछि दायित्व, जिम्मेवारी थपिएसँगै कर्तव्य पूरा गर्नेतिर मन गएको हुन्छ तर आमाप्रतिको माया सदावहार अनि उस्तै हुन्छ ।
सरस्वती लामा भुजेल, गायिका
त्यो त जोईटिङ्ग्रे पुरुष र विवकहीन महिलाहरूले गर्ने घटिया कार्य हो । अहिले पनि अधिकांश छोरा–छोरी विवाहपछि पनि आमालाई उत्तिकै आदर, सम्मान तथा माया गर्छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
कन्हैया सिंह परियार, गायक
आमा त आमा नै हो, कसैले आमालाई माया गर्न छाडेर श्रीमतीलाई मात्र माया गर्छ भने त्यो मूर्ख हो ।
सुलेमान शंकर, इकु
एउटा पुरुषले कहिल्यै आमाप्रतिको माया र कर्तव्यमा कमी गर्छ जस्तो लाग्दैन । अझ विवाहपछि आमाको माया अझ बढी लाग्छ, किनभने मैले देखे–सुनेअनुसार एउटी नारीले आफू जन्मिएको घरबाट अरूको घरमा गएपछि आफ्नी आमालाई अझ बढी माया गर्छिन् ।
प्रमि शाक्य, आरजे/उद्घोषिका
शायद माया बाँढिएर होला तर आमको माया अतुलनिय हुन्छ, श्रीमतीभक्त छोराले मात्रै त्यसो गर्ला नत्र आमा भावनाभन्दा माथि हुनुहुन्छ ।
सरोज केसी, भिजे
विवाहपछि जिम्मेवारी बोध हुुनुका साथै वैवाहिक जीवन प्रारम्भ हुने तथा कार्य व्यस्तताको कारण यस्तो लाग्नु स्वभाविक हो तथापी आफूलाई जन्म दिने आमाको मायामा कमि हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन ।
सन्तोष सापकोटा, इभेन्ट मेनेजर
आमाको न्यायो माया श्रीमती होस् अथवा आफ्नै छोराछोरी, कसैलाई दिन सकिंदैन । हुनत एकछिनको खहरे भेलजस्तो श्रीमतीको माया पाएर होला मानिस एकछिन् मात्तिन खोज्छ, तर आमाको न्यायो माया जस्तो सदाबहार पन नपाएर फेरी झस्किन थाल्छन् ।
किनभने विवाह पूर्व छोरा मान्छे एक्लो हुन्छ र आमाप्रति माया बढि हुन्छ तर विवाहपछि आफ्नो जिम्मेवार श्रीमतीतिर हेर्छन् अनि आफ्नै घरको व्यवहार ध्यान दिनु पर्ने भएकाले आमालाई माया गर्न कम गरेको जस्तो देखिन्छ, वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन ।
रामभक्त जोजिजू, गायक
त्यो कुरा सबैमा लागू हुँदैन । यदि कसैले गर्छ भने त्यो उसको आमाप्रतिको सम्मान, आमाको त्याग, दु:ख र महत्व नबुझेर हो ।
प्रकाश सुब्बा, हास्य कलाकार
प्रकाशित :वैशाख २४, २०७३